इतिहासका विपरीत धार- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
इतिहासका विपरीत धार
रेग्मीको इतिहास लेखनबाट वीरताका मिथक गायब हुन्छन् र पात्रहरू खुट्टाले टेकेर हिँड्न थाल्छन् ।
आश्विन ७, २०७४ युग पाठक
इतिहासका पुराना भाष्यमाथि प्रश्न उठेपछि हिजोआज चलेको एउटा रैथाने प्रतिप्रश्न छ— पुराना चिहान खोतलेर के पाइन्छ ? यो प्रतिप्रश्नले पुराना कागजपत्रको धूलोमा पुरिंदै नेपालको आर्थिक इतिहास उत्खनन् गरिरहेका महेशचन्द्र रेग्मीको घुर्मैलो आकृति सम्झाउँछ ।
साढे चार दशक (सन् १९५९–२००३) सम्म अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीको चिहान खोतल्न उनलाई किन मन लाग्यो ? त्यो चिहानभित्र उनले के पाए र हामीले के पाइरहेका छौं ? पछिल्लो समय ‘चर्चा धेरै गरिने तर कम पढिने’ ठानिएका रेग्मीले फेला पारेको इतिहास के थियो ?
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:३४